သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): တန်ပြန်ကွန်မင့် (Positive)
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 15:55
တိတ်တိတ်လေးဖတ်နေတဲ့သူကလဲ . သူ့အတွ့က်ကွန်မက်ဖတ်ချင်ပါသေးသတဲ့။
Sunday, 17 October 2010 at 16:05:00 BST
Sunday, 17 October 2010 at 16:32:00 BST
ဟဟဟ...အပေါ်မှာ မမကွန်က ဆော်ပလော်တီးသွားပြီ တွေ့လား ကိုကိုမောင်ရေ။
တိတ်တိတ်ကျိတ်ဖတ်တဲ့ ကိတ်ကိတ်မမများကိုလည်း သားသား ကိုကိုမောင်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့..
Sunday, 17 October 2010 at 16:38:00 BST
နာမည်တွေနဲ့ ကာရံယူထားတာ မိုက်တယ် ကိုဂျီးးးးးး ရယ်ရတယ်... ;)
ဒါနဲ့ ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) ကျတော့ ဘာဖြစ်မလဲဟင်။ သူ့နာမည်ကျ ချန်သွားတယ်..... ;(
Sunday, 17 October 2010 at 16:43:00 BST
ပေါ့စ်တစ်တွေ ဖတ်သွားပါသေးသည်.. မိုက်စ်..။
မဗေဒါ ကို ပြန်ဖြေတာ က နားလည်သလောက်ဆို ဗုဒ္ဓဘာသာဟော အရ ဘာသာရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေက တွက်ချက်ပြီး ၇၅ နှစ်သန်း ( ဆုတ်ကပ်ကြီးမှာ.. လူ့သက်တမ်း ၇၅ နှစ် ) ပဲ ခံမယ်လို့ ဆိုလိုတာလား.. ။ အဲဒါကို ၇၅ နှစ်သန်း လို့ သုံးတာလား..။ နားမလည်လို့ ပြန်မေးတာပါနော်.. နောက် ကိုမောင်သူဂျီး ပြောသလို ဘုန်းကြီး ( သို့မဟုတ်) ကိုကိုမောင်လို သိသူများထံမှာ မေးမြန်းပါအုံးမယ်နော်..။
မဗေဒါက တခါတလေမှ မဟုတ်ဘူး.. အခါများစွာ လိုက်မမီ တာတွေ ရှိပါတယ်.. ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ်.. သူဂျီးမင်း..ခွင့်လွတ်မည် ဆိုသည်ကို ကြိုသိသည့်အတွက် ဗိုလ်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ပြီး ဘုရားဟော ထဲက အခက်ဆုံး အဘိဓမ္မာ တွေ ဖတ်ပြီး မဗေဒါ နားမလည်နိုင်တာကို ရေးသားသူ ကိုကိုမောင်အား ရိုးကျိုးစွာ တင်ပြအပ်ပါကြောင်း..။
မသိတာကို ဝေမျှလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. မပေါက်ကွဲရဲတော့ပါဘူး.. အဟင်း အလကားပြောတာ ပေါက်ကွဲစရာရှိရင် ပေါက်ကွဲရအုံးမယ်..။ ဘာပဲပြောပြော ရှင်းပြတာ ကျေးဇူးပါလို့ ဆိုရင်း ပြန်တော့မယ်..။
Sunday, 17 October 2010 at 17:07:00 BST
Sunday, 17 October 2010 at 17:13:00 BST
တုံးဖလား သူကြီး ...
ဘုန်းကြီးကျောင်းသားပီသပါပေတယ် ...းD
နဘေ ကာရံတွေကို မိနေတာပဲ ...
ရတု ရကန် များများရေးသင့်တယ် ....
ဟင်းတွေရှာနေတဲ့ နှင်းဟေမာ ...
Sunday, 17 October 2010 at 17:39:00 BST
Sunday, 17 October 2010 at 19:27:00 BST
မဗေဒါ ၈၈ ဆိုသူက စာလဲ သေချာမဖတ်ဘူး။
၇၅ နှစ်တမ်းပါဆိုတာကို ၇၅ နှစ်သန်း ချည်း ပြောနေတာပဲ။
ဒီခေတ်ရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်း က ၇၅ နှစ် ရှိတယ် ဆိုလိုတာ (၇၅ နှစ်သန်းမဟုတ်)။ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကံတွေပေါ်မူတည်ပြီး ၇၅ နှစ်ထက် ရှည်ချင်လဲ ရှည်မယ်၊ တိုချင်လဲ တိုမယ်။ ၇၅ နှစ်တမ်း ဆိုတာ ပျမ်းမျှ ယေဘုယျ အသက်ကို ပြောနေတာ။ တုံးပါ့။
Sunday, 17 October 2010 at 20:04:00 BST
ဟုတ်ပါ့ဗျာ။ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာကို မျက်စိမမြင်လိုက်မိဘူး။ အမှန်ဆို ၇၅ နှစ် သက်တမ်းလို့ ရေးတာပါ။ ၇၅ နှစ်သန်းလို့ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုလို ထောက်ပြပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလုံးပြန်ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ပေါက်ကွဲခြင်းပို့စ်က စာလုံးပေါင်းမှားနေတာလဲ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ၇၅ နှစ်သန်းမဟုတ်၊ ၇၅ နှစ်သက်တမ်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို တစ်လုံးချင်းစီ ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးနော်။
တစ်ခါတစ်ခါတော့လဲ စုံထောက်ကြီးဦးစံရှားစကားနဲ့ပြောရရင် "မှားတဲ့အခါလဲ မှားပေမပေါ့ဗျာ" (ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့်:D)။
ကဲ မဗေဒါရေ... ၇၅နှစ် သက်တမ်းဆိုတဲ့ စာလုံးကို အမှန်သိပြီးနောက် ၇၅ နှစ် သက်တမ်းဆိုတာကို နဲနဲ ရှင်းပြမယ်နော်။
၇၅ နှစ်သက်တမ်းဆိုတာ ပျမ်းမျှတွက်ကိန်းပါ။ ဒါကြောင့် သက်တမ်းကျော်ပြီးမှ သေတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ သက်တမ်းစေ့မှာ သေရတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ သက်တမ်းမစေ့ခင် သေရတဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။
အမရပူရမဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ရေးသားတဲ့ သဂြိင်္ုဟ်ဘာသာဋီကာ ၀ီထိမုတ်ပိုင်းအဖွင့်မှာ သေခြင်းကို လေးမျိုးပြထားတယ်။
၃။ဥဘယက္ခယ=သက်တမ်းရာ ကံရော နှစ်မျိုးလုံးကုန်လို့သေခြင်း
၄။ဥပစ္ဆေဒက မရဏ= သက်တမ်းမစေ့ခင် ကပ်၍ဖြတ်သတ်သောကြောင့် သေခြင်း တဲ့။
၁။ ၇၅ နှစ်မှာ သေရင် သက်တမ်းကုန်လို့သေခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ၇၅ နှစ် မပြည့်ခင် သေရင် ကံကုန်လို့သေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ၇၅နှစ် ကျော်ပြီးမှသေရင် သက်တမ်းရော ကံရော တစ်ပြိုင်နက်ကုန်ဆုံးလို့ သေခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။သက်တမ်းမပြည့်ခင် ရေနစ် မီးလောင် ကားတိုက် ရထားတိုက် မြေပိ လေယာဉ်ပျက်ကျ စတဲ့ အသေဆိုးနဲ့ သေရင် ကပ်ဖြတ်သတ်လို့ သေခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်အခါမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ယေဘုယျသီအိုရီအရ ၇၅ နှစ်သက်တမ်းဘဲ ရှိတယ်လို့ ယူဆထားတဲ့အတွက် ၇၅ နှစ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားခြင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့... ဗုဒ္ဓမွေးဖွားတဲ့အချိန်ဟာ သက်တမ်း နှစ်၁၀၀ တမ်းမှာပါ။ ဗုဒ္ဓက အသက် ၈၀ အရွယ်မှာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် သူပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားခဲ့တာဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၅၅၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ အဲဒီ ၂၅၅၄ ကို ၈၀ နှင့်ပေါင်းလိုက်ရင် ၂၆၃၄ တောင်ရှိနေပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ နှစ်တစ်ရာမှာ တစ်နှစ်လျော့မယ်ဆိုရင် အခုအချိန်မှာ လူတွေရဲ့သက်တမ်းဟာ ၇၄ နှစ်သက်တမ်းဘဲ ရှိပါတော့တယ်။ (စကားချပ်)။
ကဲ မဗေဒါရေ.. တတ်သလောက် မှတ်သလောက် သိသလောက် တုံးဖလားရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဆီက လေ့လာထားတဲ့ ဗုဒ္ဓစာပေလေးတွေကို ရေးချလိုက်မိပြီ။ အမှားတွေ့ရင်လဲ ထောက်ပြဦးနော့။ စာလုံးပေါင်းမှားနေတာကစလို့ပေါ့။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
Sunday, 17 October 2010 at 20:21:00 BST
ဗျို့ သဂျီးမင်း သဂျီးမင်း အဲလို ပို့စ်မျိုး ဒီတစ်ခါပဲ ဖတ်ဖူးသေးတယ်ဂျာ။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် မသေခင်စပ်ကြား မိန်းမယူဖြစ်ခဲ့ပြီး သားသမီး ရတနာ များ ရလို့ကတော့ နံမည်ပေး ကင်ဘွမ်းတပ်ဖို့ ကူငြီ ပါအုန်းနော်။ ဂွီ
Sunday, 17 October 2010 at 22:31:00 BST
Sunday, 17 October 2010 at 22:47:00 BST
Sunday, 17 October 2010 at 23:40:00 BST
ရေးလည်းရေးတတ်ပါပေတယ် အစ်ကိုရေ ...
အစ်ကို့ ပညာတစ်ဝက်လောက် တတ်ရင်တော့ စာရေးဆရာမလုပ်တော့မယ်... အခုလို "သန္နိဋ္ဌာန်ပြုပါ၏။" ဆိုတဲ့အတိုင်း ဆက်လက်ရှင်သန် ဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ...
Monday, 18 October 2010 at 01:43:00 BST
ကိုကိုမောင်ရေ....နှစ်နှစ်ပြည့်ဆိုတော့ ကျွန်မဘလော့ထက် ၁နှစ်ကြီးတာပေါ့....အဲဒီပိုစ့်လေးတုန်းက လာတောင်မဖတ်လိုက်ဖြစ်ဘူး။ လာများဖတ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်နာမည်ကို ဘယ်လိုများပေးမလဲလို့တော့ သိချင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်။း)
ဒီမှာပဲ ဆုတောင်းပေးခဲ့တော့မယ်။ နှစ်နှစ်ပြည့်မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်၊ နှစ်ရာ(အကယ်ရွေ့နေနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့) အထိဆက်လက်ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေကြောင်း....
Monday, 18 October 2010 at 05:57:00 BST
Monday, 18 October 2010 at 06:10:00 BST
အလှအပတောမှာ ချောနေတာမဟုတ်ဘူး အနူတောမှာ လူချောဖြစ်နေတား)
ကာရံယူတဲ့နေရာမှာ ကိုကိုမောင်က စူပါဘဲနော်။
လူသူမနီးတဲ့ တောကြီးမျက်မဲထဲ အပို့ခံရမယ်.. :)
ဆက်လက်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာ အရေးအသားများနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ရွှင်ပြုံးစရာများ၊ အတွေ့အကြုံများ၊ သုတများ မျှဝေပါဦး ကိုကိုမောင်ရေ။
Monday, 18 October 2010 at 06:16:00 BST
ခံစားသွားတယ် သူကြီးပို့စ်ကို စဖတ်ပြီးကတည်းက နောက်ပိုင်းေ၇ာက်ပါတယ်
Monday, 18 October 2010 at 09:01:00 BST
ရှေ့ဆက်ပြီး အများကြီး အောင်မြင်ပါစေ..လို့
ကွန်မန့်များလည်း ဖတ်ကောင်းကြောင်းး)
Monday, 18 October 2010 at 10:41:00 BST
ဟိုင်း ကိုကိုမောင် ..
အဖြေလာရှာတာ.. ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်..။ ပညာတွေ လည်း ယူသွားပါသည်.. မေ့ရင်လည်း လာရှာဖတ်ပါ့မယ်နော်.. ဟုတ်ပါတယ် ( ၇၅) နှစ်သန်းရယ်ကြောင့် မဗေဒါ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ ကျန်တာတွေပါ သိရလို့ ကျေးဇူးပါလို့ အခါခါဆိုရင်း ..ပြန်ပါပြီတော်..။
နေအုံး.. တခု ကျန်ပသေး..ဟဲ..။ မဗေဒါ က စာလုံးပေါင်းကို ပြောချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး.. တကယ်ပဲ ရ၅ နှစ်သန်းကို အဓိပါယ် ရှိမယ်လို့ ယူဆခဲ့မိတာကြောင့် ထပ်မေးတာပါ.. စာလုံးပေါင်းလား.. မဗေဒါမှာ ရှာကြည့် အများကြီးပါ..။ အပြစ်မရှာတက်ပါဘူးနော်.. ပညာပဲ ရှာပါတယ်..သူဂျီးရယ်..။
Monday, 18 October 2010 at 11:37:00 BST
သူ့ လက်သံ တန်ပြန်ထောင်တယ်
Monday, 18 October 2010 at 14:51:00 BST
အဟိ လန့်တောင်လာပြီ တန်ပြန်ကော့မန် တဲ့ တော်သေးတယ် တန့်ပြန်တော်လှန်ရေး မဟုတ်လို့
Monday, 18 October 2010 at 15:25:00 BST
တိတ်တိတ်လေးကြိတ်ဖတ်ပြီး အားပေးတဲ့ သူတွေကိုလည်း မိန့်ကြားပေးပါ ကိုကိုမှောင်
တခါမှ မမန့်ဘူးပါ...အခုတော့ မန့်ပစ်လိုက်ပြီ...
Tuesday, 19 October 2010 at 01:40:00 BST
Tuesday, 19 October 2010 at 05:07:00 BST
ရေးရေးတတ်လွန်းတဲ့ ကိုကိုမောင် Thanks
Tuesday, 19 October 2010 at 06:57:00 BST
သူကြီးတို့က ဒါမျိုးတွေလည်း ရတာပဲ။
ဖတ်သူ ရေးသူ ပြုံးပျော်စေလို့ ကျနော်ကလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။
ရွှင်မြူး တက်ကြွတဲ့ ဥာဏ်စွမ်းနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ထပ်ပြီး ပြုံးပျော်ပါစေအုံးဗျာ။
Tuesday, 19 October 2010 at 16:43:00 BST
"' သွန်းအလှပဂေးဖြစ်တဲ့ ယွန်းညီမလေး "' ဆိုပဲ..
ရေးလဲရေးတတ်တဲ့ တဂျီးးပါလားး ဟာဟ..
မိုးယံ ၊ နေ၀သန် နဲ့ဘလက်ရို့ စ် နာမည်တွေက ပိုတောင်မိုက်သေးးး
Tuesday, 19 October 2010 at 21:56:00 BST
နှစ်နှစ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ စာတွေ ဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေနော်..
Wednesday, 20 October 2010 at 07:39:00 BST
Wednesday, 20 October 2010 at 15:08:00 BST
ကွန်မကောင်လို့လှည့်လှည့်ပြန်သွားရတဲ့ များတို့ကိုတော့ သချီးက မသိပေဖူးပေါ့ ဟွန့်
Wednesday, 20 October 2010 at 16:40:00 BST
အစ်ကိုရေ အစ်ကို့ ဘလော့လေး 2နှစ်ပြည့်တာတောင်မသိ
လိုက်ဘူး မအားတာနဲ့ မ၀င်ဖြစ်တာခုမှဝင်ဖြစ်တယ် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်
အစ်ကိုဘလော့လေး ထာဝရတည်တံ့နေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး
ခဲ့ပါတယ် အစ်ကိုရေ . . . စာပေကောင်းများ ဗဟုသုတ
Friday, 19 November 2010 at 10:48:00 GMT